Nipoitra ilay Anjely. BNL Ministries - mg21
Nipoitra ilay Anjely
Ny Asan’Ilay Mpaminany mifanesy.
Ny Hafatra avy amin’ny Anjely.
Anankiray amin'ireo zavatra hafahafa niainan’i Paoly, dia mahakasika ilay famangiana avy any an-danitra, rehefa nentina ho any Roma toy ny voafonja izy,izay teo ambanin'ny fifehezan’ny miaramila Romanina. Talohan'ny izy ireo hiainga ho any Kreta, i Paoly dia nilaza tamin’ny lehiben'ny mpiambina ny sambo mba tsy hametraka ny voaly. Fa ilay kapiteny amin’ny maha tatsambo azy, izay nihevitra fa fantany tsara ny amin'ny samonta, ny fandehan’ny rivotra, toetrandro, ary ny ranomasina noho i Paoly, ka napetany ihany ny voaly. Andro vitsivitsy foana no nialàny tamin'ilay nosy dia teo amin’ny tafio-drivotra mahery no nisy azy ireo. Nanipy ny entana hiatrehana sy ranomasina izy ireo mba hanamaivana ny sambo fandrao hilentika ny sambo ka ho ringana ny rehetra. Nangina kely aloha i Paoly, araka ny voasoratra ao amin’ny Asa 27:21-22.
21 Ary rehefa tsy nihinan-kanina ela izy ireo, Paoly dia nitsangana teo afovoany ka nanao hoe: Ry tompokolahy ô, tsara raha ho nihaino ahy ianareo ka tsy niala tany Kreta, mba tsy ho nahitana izao fahasimbana sy fatiantoka izao.
22 Ary ankehitriny mananatra anareo aho mba hatoky; fa tsy hisy ho faty ianareo, fa ny sambo ihany no ho very.
Dia tsy maintsy hiaiky fa izany no tena hafahafa fanambaràna ho an'ny olona, ny tenany ho mpifatotra, mba ho an'ireo miandraikitra ny sambo. Raha rehetra dia natahotra noho ny ainy, dia nilaza fa tokony ho nihaino azy, nefa ankehitriny dia tokony matokia, fa tsy ho faty, na dia ny sambo ho very. Rehefa inona no fahefana dia ny olona toa an'i Paoly, ny voafonja, miteny toy izany ny fanambarana? Hoy ny andininy faha-23:
23 Fa nisy anjelin'Andriamanitra, Izay Tompoko sady tompoiko, nitsangana teo anilako alina.
24 ka nanao hoe: Aza matahotra, ry Paoly; (Marihina fa ilay Anjely tamin’ny voalohany dia nampitony ny tahotr’ilay lehilahy, Paoly,ary nolazainy mba tsy hahatahotra.) fa tsy maintsy hitsangana eo anatrehan'i Kaisara ianao; ary, indro, efa nomen'Andriamanitra anao ny olona rehetra izay miaraka aminao.
25 Koa matokia, ry tompokolahy ô, fa mino an'Andriamanitra aho fa ho tonga araka ny voalazany tamiko izany.
Ary nahoana i Paoly no miteny toy ny manana fahefana? Izany dia satria Andriamanitra naniraka anjely mba hitsangana teo anilany dia nilaza ny teny izay nolazain’io anjely taminy io Paoly. Koa satria ilay anjely dia iraka avy amin'Andriamanitra, noho izany i Paoly dia afaka niteny hoe "Izao no lazain'Andriamanitra"
Taorian'ny fiainan’ny Rahalahy Branham tany am-boalohany izay nahavariana, taorian’ny niovany fo, ny taona nifandimby dia nanompo an'Andriamanitra araka izay faran’ny fahaizany izy, tamin’ny maha pasitora sy mpiasa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra azy. Nanao asa toy ny mpiambina lalao (haza) tany Indiana mihintsy aza izy. Ny fiandohan'ny fiovàna goavana nitrànga teo amin'ny fiainany sy ny asa fanompoany dia nanomboka tamin'ny fiandohan'ny volana Martsa, 1946 rehefa niverina avy any an-trano nisakafo atoandro ka nankeo ambanin'ny hazo Maple izay teo amin'ny anoloan'ny tokotanin’ny an-tranony, teo 8th Street, Jeffersonville, Indiana. Ary raha nandeha tambanin'ny hazo izy, dia nitantara fa nisy rivotra mahery, miriotra r niditra tao amin’ilay hazo. Ary namely ny tampon'ilay hazo Maple ary toa tahaka ny hianjera ny fijeriny azy. Lehibe ny fiantraikan’izanyka nahatonga azy ho taitra. Ny vadiny sy ny olon-kafa nihazakazaka nanatona nieritreritra fa narary izy. Dia nitodika taminy izy ka nanao izao teny izao, "Fa roa-polo taona mahery izao mbola tsy takatro ny dikan’ity fanompoana hafahafa ity, ny fiantraikan’izany eo amin'ny tenako. Tsy afaka mitohy toy izao aho. Mila manana ny valiny aho."
Rehefa nanapa-kevitra sy nilaza ny fikasany, Rahalahy Branham dia nandeha irery hitady an'Andriamanitra irery tao amin’ny toerana mangingina, tapa-kevitra ny hahafantatra ny valiny, ary mba hahita fiadanana tao am-pony momba izany fihetseham-po hafahafa izany sy ireo tranga ireo.
Rahalahy Branham dia niankohoka tamin'ny tarehiny tao amin'ny lava-bato teo anatrehan'Andriamanitra. Ary rehefa nivavaka tao am-pony izy avy amin'ny fahatsoram-po, mangataka amin'Andriamanitra, dia nilaza fa niarina ka niandry ny valiny. Nipetraka teo, fotsiny izy, niandry an'Andriamanitra hiteny. Impiry no nandrenesanay azy nanao hoe: "izay miandry an'i Jehovah ..." Matetika rehefa mivavaka isika, ataontsika daholo ny resaka, ary raha vao vita ny resaka dia lasa isika. Nilaza izy fa ny zava-miafina dia rehefa avy mivavaka dia tokony hanana faharetana mba hiandry an’Andriamanitra hiteny indray. Izany dia raha mino ianao fa efa nihaino anao Andriamanitra, dia miandrasa ny valiny. Rahalahy Branham dia nanolotra ny tenany ho amin’ ny sitrapon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany.
Ary efa tokony ho ora faha-11 dia nahita hazavana malefaka nipoitra teo anatrehany. Dia niandràndra ka nitsangana mba hifindra hanatrika ity fahazavana dia nihantona teo ilay kintana lehibe. Ary tsy manana teboka dimy toy ny kintana io, fa toy ny baolina afo. Avy eo, dia nandre dian-tongotra izy, lehilahy vaventy iray nanatona azy. Angamba ilay lehilahy mety nilanja 91 kilao, ny fihodirany dia maizina, tsy misy volombava, ny halavan'ny volony dia hatreo antsorony. Rehefa nijery ny masony ilay lehilahy, dia natahotra mafy Rahalahy Branham, fa ilay vahiny nijery azy tamin'ny fomba tsara fanahy ka dia nanomboka niteny. Toy ilay anjely nitsangana teo anilan’ i Paoly, ary nanome azy toromarika, io anjely io dia nitsangana teo anilan’i Rahalahy Branham ary nanome azy toromarika. Nametraka ireo torolalana ireo eto aho amin'ny sokajy fito samihafa:
"Aza matahotra", hoy ilay anjely, nampitony an’i Rahalahy Branham, ary nanohy hoe: "Izaho dia iraka, nirahina ho aminao avy eo anatrehan'Andriamanitra Tsitoha." Izany no dingana voalohany, nampitony tahotra sy ny fampahafantarana ny tenany.
Ao amin'ny dingana faharoa, dia niteny tamin'i Rahalahy Branham izy momba ny fiainany, nanao hoe: "Tiako ho fantatrao fa ny fiainana hafahafa dia misy dikany eo amin'ny fanomanana anao mba hanaovanao ny asa izay efa voatendrin’Andriamanitra ho ataonao hatrany ambohoka."
Dingana fahatelo: ilay anjely nilaza taminy fa misy fepetra tsy maintsy arahiny sy hotandremany. Hoy izy hoe: "Raha toa ianao ka tso-po, ary afaka mahazo ny olona mba hino anao..." Ary avy eo dia nandroso ho any amin'ny dingana fahefatra - ny vokatra:
Hoy izy hoe,: "...na inona na inona tsy ahajanona eo anoloan'ny ny vavakao, na dia omamiadana aza!"
Eto ary jereo ny tenin 'ilay anjely hatramin'izao. Nampitony ny Rahalahy Branham izy sy nampahafantatra ny tenany. Nolazainy taminy fa fantany ny momba ny fiainany taloha sy ny fikasany. Nilaza taminy ihany koa izy fa tsy maintsy ho vokatry ny fony, ary ny olona tsy maintsy mino azy. Te-hilaza izany amin'ny fiteniko aho: Raha ny Anjelin'Andriamanitra no nilaza ny Rahalahy Branham fa tsy maintsy vokatry ny fony, mainka va fa isika, tsy maintsy nolazaina mba ho tso-po? Ary koa zava-dehibe ny ahazoany ny olona mba hino, noho izany, raha tsy mino ny Rahalahy Branham ho mpaminany ianao, fa mpaminanin’Andriamanitra amin’izao fotoana izao, dia tsy ho anao ny hafany sy ny asa fanompoany.
Ny dingana tamin’ny hafatr’ilay anjely dia ny fampitandremana ny olona mba hiaiky ny fahotany alohan’ny ahatongavany eo anoloan'io lehilahin'Andriamanitra io, ary izy no hilaza ny olona fa ny eritreritr’izy ireo dia miteny mafy eo anoloan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra noho ny teniny. Izany dia fampitandremana ho an'ny olombelona rehetra.
Ary ilay anjely dia nankany amin'ny dingana fahaenina ary nilaza ny Rahalahy Branham zavatra momba ny fiainany sy ny asa fanompoany ho avy. Nilaza izy fa hitory eo anatrehan'ny maro manerana izao tontolo izao sy hitsangana eo amin’ny efitrano malalaka hiboka olona, miaraka amin'ny olona niala noho ny tsy fisian'ny efitrano izy. Ny fiangonany any Jeffersonville ho lasa foiben-toerana handehanan’ny olona avy manerana izao tontolo izao, mitady ny vavaka ataony ho fanafahana azy ireo.
Eto dia nitsangana ny anjelin'Andriamanitra nilaza taminy: "Ianao hitory eo anatrehan'ny vahoaka, an'arivony eran-tany ho avy any aminao mba hivavahana sy handray torohevitra." Tsy izay ihany, fa ilay anjely dia nitohy nilaza fa "hivavaka ho an'ny mpanjaka sy ny mpanapaka ianao ary ny mpanao didijadona."
Nadika sombiny avy... "Ny Asan’Ilay Mpaminany" Toko 8 - Nipoitra ilay Anjely.
Tsindrio ny sary mba ahazoana lehibebe amin'ny PDF.
Ny Asan’Ilay Mpaminany
- Nipoitra ilay Anjely.
Story. (PDF Anglisy)
testimony. (PDF Anglisy)
Ny Misiterin'i Kristy.
Anglisy gazetikely vohikala.
Ny Bokin’ny Fanambarana.
Andriamanitra sy ny Siansa. - Arkaeolojia.
Tonga ny Fampakarana.
Ireo fampianarana lehibe ao amin’ny hafatra.
Ny vaovao Mahfaly.
maty nohon'ny fahotanao Jesosy.
Ilay Rahona tsy azo hazavaina.
Ny Voninahitra Shekinah
Foana ny fasana,
Ilay Mpialoha Lalana.
Andriamanitra dia Mazava.
Voazava ny momban’Andriamanitra.
Ny Asan’Ilay Mpaminany.
Ny Taom-piangonana Fito.
Ny Tombokase Fito.
Andriamanitra sy ny andian-dahatsoratra
ara-tantàra - Daniela.
Andriamanitra sy ny Siansa. - Fiovàna.
Sambo Fiaran’i Noa.
Ny Fisarihana Fahatelo.
Ny feon'ny Famantarana.
Nipoitra ilay Anjely.
Paoma ve ilay izy?
Izany vehivavy Jezebela izany.
Kristy Ivelan'ny Fiangonana.
Andriamanitra sy ny Siansa.
Andriamanitra sy ny Siansa. Angano momba ny Dinôzôro.
Sodoma sy Gomora.
Soratra Masina ity.
Ny Firafitry ny
Hoy ny Soratra Masina...
Na zovy na zovy mitady hamonjy ny ainy dia hahavery azy; ary na zovy na zovy no hahavery ny ainy dia hahazo izany.
Hafatra maharevo... Safidio ny fiteny, dia alaivo maimaimpoana, avy any amin'ny Rahalahy William Branham ireo Hafatra ireo.
Ny Gazety ho an’ny mpino Dia navoakan'ny Christian Publicity and Promotions (NZ).
Ity pejy navoakan'ny BNL asa fanompoana.
Mamela ahy amin’ireo diso tamin’ny fandikako teny.
Ph: +64 7 8279991 (Anglisy)